GAWRICII KIISHA | Bal ila sawiro akhriste ! – Kaasho Maanka
Waxad ahayd wiil yar oo dagana magaalo KIISHA la yidhaa oo dhashay sanadku markuu ahaa 620 (miilaadi). laba jir adoo ah magaaladiina waxa soo galay nin reerkiisii ka soo cararay oo la soo caydhiyay. reerka aad ka dhalatay iyo laba reer oo kale ayaa ku heshiiyay inay ninkan la soo caydhiyay si nabdoon magaalada u soo galiyaan oo aanay dib ugu celin reerkiisii.
ninkan wuxu Sheeganayaa inuu yahay kii badbaadin lahaa isagoo codsanaya in hogaamiyaha magaaladaa laga dhigo askar iyo ciidanna la siiyo si uu dagaallo ugu qaado magaalooyinka jaarka ah.
Nasiib darro labadii reer ee kale ayaa arintaa ku raacay, laakiin reerkii aad ka dhalatay waa iska diideen oo colaad ma rabno ayay dheheen. heshiisbuu reerkiina la galay ah in aynaad reeraha kale uga hiilin xiliga uu dagaalka kula jiro.
Ninkii magaaladii aad ku noolayd wuxu ka noqday taliyaha 1aad, waa nin dagaal jecele wuxu weeraray reerkiisii uu cago-cadaan kaga soo cararay isagoo aar gudasho u socda. dagaalo dhawr ah ayuu la galay qaarna waa ku guulaystay qaarna waa lagaga guulaystay.
Ninkan dagaalka jeceli wuxu dadka magaalada KIISHA baraa nacaybka reerkaaga, isagoo aflagaadeyn iyo xumaan badan idinku sheega. Reerkiini iyo labadii reer ee kale nacayb ayuu dhex dhigay oo reerkina wuxu ku tilmaama inay daayeero iyo khinziir ka soo jeedan, labada reer ee kalana dad sharaf leh oo u hiilayay inay yihiin ayuu ku beer laxawsadaa.
Iyadoo xaalada magaalada KIISHA ay sidaa tahay ayaa waxa weerar cudud leh soo qaaday reerkii soo caydhiyay ugu horayntii iyagoo ka dhiidhinaya weerarada uu ku hayo iyo ganacsigooda oo uu luuqyada u galo isago khasab iyo xoog ku booba.
Dagaalo koo-kooban ayaa la galay, waxay u ekaatay in ninka laga tamar badan yahay oo laga guulaysan rabo. reerkiini ayaa wuxu go’aansaday in uu wada hadal sir ah la yeesho abaanduulayaasha magaaladiina ku soo duulay si ay u badbaadiyaan hadii ay magaalada qabsadaan.
Arrintaa waxa ogaaday xaaji xanaaq badane oo aad uga cadhooday kuna tilmaamay balan-jabin iyo munaafaqnimo lagula kacay heshiiskii uu reerkiina ku harawsaday. inkastoo uu nacayb iyo sumcad xumayn ku wajahan reerkiina ka waday golayaasha magaalada.
dagaalkii markii uu soo idlaaday ee uu ka guulaystay reerkiisi, isaga iyo ciidankiisi waxay u soo kicitimeen dhankaa iyo reerkaagi iyagoo hareeraynaayo xaafadii aad ka daganaydeen magaalada KIISHA.
25 cisho ayuu go’doon ku hayay xaafadiina, cunto iyo wixii idiin kaydsanaa markay dhamaadeen odayaashii reerkiinu waxay go’aan ku gaadheen inay isu dhiibaan MA NAXE. Labadii reer ee saaxiibka la ahaan jiray reerkiina ayaa mid ka mid ahi ergo ugu tahay MA NAXE iyagoo ka codsanaya inuu xukunka ka khafiifiyo reerkiina.
MA NAXE, wuxu ku xukmay reerkiini sida tan ” Guud ahaan Odayaasha, dhalin yarta, doobabka, madaxa ayaa laga jarayaa naxariis iyo jixin jixna ma jiri doono, DUMARKA IYO CARUURTA waxa qaybsan doona labadii reer ee kale, iyagoo la adoonsan doono suuqyadana lagu kala iibsan doono inta noloshooda ka dhiman”
Adiga, Hooyadaa, ina adeertaa, habadaa, ededaa, ayaydaa, ina abtidaa, ina adeertaa iyo 10 hablood ood walaalo tihiin waxa qaatay oo xoolo ahaan loo siiyay Abaan duule MA NAXE.
Sidoo kale wuxu dilay Aabaha iyo 5 wiil oo kula dhashay, adeeradaa iyo dhamaan abtiyaashaa iyo wiilashay dhaleen.
Adoon yar ayaad u ahayd MA NAXE, sida dameeraha ayuu ku raran jiray. Habeenkii marka aad seexanayso waxa aad maqli jirtay cabaadka iyo qaylada ka yeedhaysa hooyadaa iyo walaashaa oo fal kufsi ah loo gaysanayo.
Intaa kuma joogine, taariikhda ayuu ka masaxay reerkiina, wuxu amray dadkii isaga taabacsana inayna mar naba u ogolaan in reerihiinu ay deegaanadan soo galaan. Umudaha gadaal ka soo bixi doona ee isaga afkaartiisa raaci doona ayuu sidoo kale fariin u diray ah inay dilaan meel kasta oo ay ku arkaan qof ku abtirsanaya reerkaaga.
Dadbaa jira ku odhan doona Abaanduule MA NAXE wuxu ahaa ninkii ugu naxariista badnaa guud ahaan dadkii dunida soo maray iyo kuwa soo mari doonaba.
Waa wax layaab leh, Ma Nexe addoonsiga birimageysada, go’doominta, bililiqeysiga iyo kufsiga dumarkaba waxaa uu kaga sinaay boqorkii Mangooliya ee Timojin/Geengis Khaan
ida aan arkaynay muddooyinkaan dambe wadaadada soomaalidu waxay ahayeen kuwo howshaa qabanaya, waxaad arkaysaa wadaad soo fariisanaya shaashadaha wax laga daawado kuna baaqaya in eebbe dartiis wax loola baxo, aadanahana eebbe u weydiinaya dembi dhaaf, caamada oo haween u badanina ay leeyihiin “Sheekhoow ilaahay ii weydii” waa adigaa iga xigee igala hadal oo waxaas ii weydii waxaa...
Gumaystaha reer Yurub maxaa lagu maagay?
Dunida la gumaystey waxa ay sheegaan in gobannimodoonkoodii ay halyeyo u soo halgameen ama kaga dhinteen. Waa arrin wanaagsan, laakiin dal kasta xilliga in uu xoroobey la sheego ka dib waxaa ilbaxnimo u ahaa af ahaan iyo si kasta dalkii gumaystey oo aqoonta iyo tabobarrada waxaa ka darnaa sida uu ugu milnaa dalka oo dhan oo loogu hiranayey ama loogu arkey sarreeyaha af ahaan iyo ilbaxnimo ahaa la...
W/Q: Samawade Seeraar 5th November 2020